Ammaanka Baska | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Badbaadada joogsiga baska iyo baska iskuulka waxay kuxirantahay iskaashiga iyo dhaqanka masuuliyada ee arday kasta.
Fadlan kala hadal canuggaaga qawaaniinta amniga soo socda. Inta lagu jiro usbuuca ugu horeeya ee iskuulka, wadayaasha basaska waxay xooga saari doonaan qodobadan iyaga iyo wadayaashooda:
Waqtiga ilaali si aad uga caawiso basku inuu jadwalka ku dego.
Yimaada boosteejada baska shan daqiiqo ka hor waqtiga loo qorsheeyay imaatinka baska.
Dib uga istaag cidhifka wadada ama laamiga inta aad baska sugeyso.
Ka fogow dariiqa si aadan u noqon qatar taraafiko oo la socota dadka baabuurta ku dhaafaya joogsiga. Meesha basku istaago ma aha garoon lagu ciyaaro.
Qashin haku daadin Waxaad marti ku tahay meesha basku istaago, waana kuu sharaf inaad isticmaasho aagga.
Saf safka ilaa saddex illaa shan fuudh oo ka durugsan geeska faylka keli ah. Ha u dhowaan baska illaa uu ka joogsado dhaqaaqisteeda albaabkuna furan yahay. Sug darawalka basku inuu kuu tilmaamo inaad baska fuulayso.
Haddii joogsiga basku ku yaal dhinaca ka soo horjeedka wadada, sug inta basku istaagayo oo nidaamka digniinta nalka cas loo hawlgelinayo. Darawalka basku wuxuu kuu yeeri doonaa inaad ka gudubto wadada. U fiirso labada dhinacba ka hor intaadan tallaabin.
Fuula feylka calaamadda baska. Adeegso gacmaha Toos ugu tag kursigaaga.
Raac tilmaamaha wadaha baska.
Khatar ha gelin naftaada ama dadka kale.
Basaska ha ku soo darin xayawaan, cunto, xanjo, cabitaanno, tubaako, kiimikooyin ama walxo halis ah.
Hadal ula dhaqan si edeb leh.
Caawi si aad baskaaga u ahaato mid nadiif ah oo ammaan ah.
Sug baska inuu istaago intaadan istaagin. Isticmaal gacan-qabashada, qaado hal talaabo markiiba, ha riixin ama ha tuurin, oo toos u aad dugsiga ama guriga.
Ardayda ay tahay inay ka gudbaan wadada waa inay ka baxaan ugu yaraan 10 fuudh baska hortiisa, kor u eegaan darawalka baska, oo ay sugaan calaamadiisa / gacanteeda inay ka gudubto wadada. Markii aad ka gudbeysid wadada, fiiri labada dhinacba. Xusuusnow inaad ka guurto baska markaad ka baxdo ka dib.
Ardayda baska kaxeeya waxaa looga baahan yahay inay helaan tababar xagga amniga ah
Ardayda xanaanada ilaa fasalka 10aad waa in laga siiyaa shahaadada raacida baska dugsiga. Inta lagu jiro lixda toddobaad ee ugu horreysa dugsiga, ardaydu waxay heli doonaan tababarka badbaadada ee looga baahan yahay caddeynta. Si loo iftiimiyo waxqabadyadan, gobolka Minnesota wuxuu u qoondeeyay usbuuca koowaad ee sanad dugsiyeed kasta Isbuuca Badbaadada Baska Dugsiga.
Siyaasadaha Degmadayada ee ku saabsan gaadiidka ardayda waxaa laga helaa Siyaasadda 709 ( Siyaasadda Badbaadada Gaadiidka Ardayda ) iyo Nidaamka 707 ( Gaadiidka Ardayda Dugsiyada Dadweynaha ).
Qaanuunka 709 wuxuu xoojinayaa fikradda ah in meesha nabadgelyadu khuseyso, ay tahay mudnaan ee aysan xaq u lahayn arday inuu raaco baska dugsiga.
Si loo hubiyo in amnigu yahay qodobka koowaad ee gaadiidka dugsiga, Nidaamka 709 wuxuu qeexayaa waajibaadka saaran waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah, maamulayaasha iskuulka iyo wadayaasha basaska.
Dadka qaangaarka ah ee waalidiinta sharciga ah ama masuulka ka ah ardayda ayaa, sida uu qabo sharciga gobolka Minnesota, ayaa mas'uul ka ah u kaxeynta caruurtooda iyo ka kaxeynta iskuulka iyo howlaha la xiriira iskuulka haddii ay dhacdo in caruurtaasi aysan awoodin ama aysan rabin inay muujiyaan awooda looga baahan yahay raacida gawaarida dugsiga . Waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah waxay sidoo kale mas'uul ka yihiin nabadgelyada carruurtooda joogsiga baska ee xaafadda, iyo inay carruurtooda keenaan ama ka yimaadaan joogsiga baska ee ugu dhow haddii ay dhacdo in gaari dugsi aan loo qorsheyn karin inuu ku sii socdo meel u dhow gurigooda.
Maamulayaasha iyo shaqaalaha dhismaha ee loo qoondeeyey ayaa mas'uul ka ah tababarka iyo shahaadaynta ardayda ee ku aaddan karti u lahaanshaha kaxaynta baabuurta dugsiga, baaskiil wadista iyo dhaqdhaqaaqa taraafikada dadka lugaynaya. Maamulaha ayaa ka joojin doona mudnaanta raacida gawaarida dugsiga ardayda aan helin shahaadada iyo ardayda ku adkeysata anshax xumada inta lagu jiro sanad dugsiyeedka.
Wadayaasha basaska xirfadleyda ah ayaa mas'uul ka ah soo bandhigida xirfadaha iyo aqoonta lagu qoray sharciga Minnesota iyo qeexida qandaraaska Degmada.
Ardayda muujiyey inay leeyihiin aqoonta iyo xirfadaha looga baahan yahay raacida gaari dugsi, oo sii wadaya muujinta isla, waxaa la siin doonaa mudnaan ay ku saaran yihiin baabuurtaas. Ardayda aan marka hore soo bandhigin, ama mar kasta oo ay joojiyaan inay soo bandhigaan kuwan karti leh, waa in lagala laabtaa mudnaanta gaarigooda u saarnaanshaha si waafaqsan nidaamka degmada.
Shuruudaha Shahaadada Ardayda
Tababarka ardayda waxaa ka mid ah barashada fasalka iyo tababar wax ku ool ah oo saaran baska dugsiga. Markuu dhamaysto tababarka, ardaygu wuxuu awood u yeelan doonaa inuu muujiyo aqoon iyo xirfado gaar ah, oo ay ku jiraan:
Gaadiidka baska iskuulku waa mudnaan, maahan xaquuq
Fahamka siyaasadaha Degmada ee ku wajahan anshaxa ardayda iyo nabadgelyada baska dugsiga
Dhaqan ku habboon inta aad baska saaran tahay
Aagagga halista ah ee ku xeeran baska dugsiga
Nidaamyada si ammaan ah loo raaco loona baxo baska dugsiga
Nidaamyada marinka haadka gawaarida ee nabdoon
Ka daadgureynta baska dugsiga iyo hababka kale ee degdegga ah
Nidaamka badbaadada dadka lugeynaya iyo baaskiilka